Keto Guru effervecent တက်ဘလက်များ - ငါ ၂၈ ကီလိုဂရမ်ဆုံးရှုံးခဲ့ပုံ။အသုံးပြုခြင်း၏ငါ့အတှေ့အကွုံမြား
Keto Guru ကကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုပြန်လည်ရရှိစေပုံ
မြန်မာနိုင်ငံတွင်အစားအသောက်များကဲ့သို့သောအရာမရှိပါ။ငါသည်ငါ့ဝမ်းနည်းဖွယ်အတွေ့အကြုံကနေဒီနိဂုံးချုပ်။ယင်းအစား၎င်းသည်လူအများတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ပြောဆိုကြသည့်အကြောင်း၊ ထိုင်နေသည့်ထိုင်ရာနှင့်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမှနောက်ဆုံးတွင်မည်သူ့ကိုမျှအကူအညီမပေးသောနားမလည်နိုင်သည့်ရက်စက်သောအစားအစာအချို့ဖြစ်သည်။
ဒုတိယဒုတိယကိုယ် ၀ န်ရှိပြီးအသက် ၃၀ တွင်ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက် ၃၂ ​​ကီလိုဂရမ်ရရှိခဲ့သည်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကကျွန်မတော်တော်လေးပါးလွှာတယ်။ကျွန်ုပ်ကလေးကိုနို့တိုက်နေစဉ်ဟော်မုန်းများပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီးကျွန်ုပ်၏လှပသောပုံရိပ်ကိုပြန်လှည့်လာမည်ကိုစိတ်သက်သာရာရစေခဲ့သည်။ဒါပေမယ့်အရာရာတိုင်းဟာပိုပြီးရှုပ်ထွေးလာတယ်။
အမျိုးမျိုးသောအာဟာရများဖြစ်သောဂျုံ၊ ဂျပန်၊ငါမကြိုးစား၊ ငါပင်အငတ်!
ငါပုံမှန်အားကစားခန်းမကိုသွားခဲ့တယ်၊မှန်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်အဲဒီကိုသွားနေတုန်း၊ အလေးချိန်ကတဖြည်းဖြည်းလျော့သွားပုံရတယ်၊ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်တာကိုရပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ပိုများလာတယ်။
ကျွန်ုပ်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကော့တေးအမျိုးမျိုးကိုသောက်သုံးသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေပြီးဂျီဂျီသီး၊ ကော်ဖီစိမ်းများကိုစားခဲ့သည်။သူမသည်ကိုယ်ခန္ဓာခြုံငုံခြင်း၊ နှိပ်နယ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည် - ယေဘုယျအားဖြင့်သူမအဝလွန်ခြင်းနှင့်တက်ကြွစွာစစ်ဆင်နွှဲခဲ့သည်။ဒါပေမဲ့ဘာမှမကူညီ။ငါသည်ငါ့ပိုက်ဆံဖြုန်းခဲ့သည်!
ယခုကျွန်ုပ်လက်များလက်များကျနေသည့်အချိန်၊ အစ်မ၏မွေးနေ့ပွဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့တော်၌လူသိများသောအာဟာရပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ကျွန်ုပ်သည်သူမ၏ပြproblemနာနှင့် ပတ်သက်၍ သူမကပြောကြားခဲ့သည်မှာသဘာဝအဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းအတွက်ဇီဝဖြည့်စွက်ဆေးရည်သောက်ဆေးကိုကျွန်ုပ်အားပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ဆေးကိုပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်သာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသတိပေးခဲ့သည်။
Keto Guru တက်ဘလက်များနှင့်ငါ့အတွေ့အကြုံ
ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူမကိုယုံပြီးဒီဆေးတွေကိုမှာထားပါတယ်။ဒါနဲ့သူတို့ကိုငါစယူခဲ့သည်။တက်ဘလက်များသည်အနည်းငယ်ချိုမြိန်လှပြီးအရသာမှာဓာတုမဟုတ်၊ မွှေးသည်။အစားအသောက်မတိုင်မီတစ်ရက်လျှင် ၁ ဆေးပမာဏသောက်သုံးသောဆေးပမာဏသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
သုံးပတ်အတွင်း ၁၀ ကီလိုဂရမ်ငါဆုံးရှုံးခဲ့သည်။တစ်ချိန်တည်းမှာငါလုံးဝဘာမျှမလုပ်ခဲ့ကောင်းပြီ၊ သူမကအဆီအနည်းငယ်သောအစာများ၊ သကြားလုံးများကိုလျှော့ချသည်။နောက် ၂ ပတ်အကြာမှာတော့ ၄ ကီလိုဂရမ်ထပ်တိုးသွားတယ်။နောက်သင်တန်းတစ်ခုထပ်မှာပြီးတာနဲ့ ၂၈ ကီလိုဂရမ်လောက်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ကြိုးစားအားထုတ်မှု!
ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေ၊ သက်သောင့်သက်သာနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ Keto Guru ကမင်းရဲ့ပုံကိုဂရုစိုက်ပါလိမ့်မယ်။အဆုံးမဲ့အစားအစာများနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်းနှင့်ညအချိန်တွင်သင်၏ခေါင်းအုံးထဲသို့မငိုပါနှင့်။အပြောင်းအလဲတစ်ခုလုပ်ဖို့အချိန်ကျပြီ။